Mazuva awakafanira kutenga gumbo rakatsaurirwa uye kutora mutoro wemari kuti uwane ruzivo rwemitambo yakareba kwenguva refu. Tinotenda nekuda kwe iPhone (uye iPod touch) neApp Store, unogona kuwana unhu hukuru hwekubhejera hwemafoni kune mashoma bucks (kana quid, nokuda kwechinhu ichocho), kana zvishoma.
Muchokwadi, yakawanda yemitambo kunze uko yakasununguka. Asi iwe unogona kuwana yakakura mitambo pasina chero, kana iyo 'yemahara' chikamu cheShopu App ingori shoddy yekukuvhundutsa iwe ne-mu-kutenga kutenga?
Mhinduro iri, hongu, zvese. Unyengeri huri kuwana matombo pakati pemarara, uye chii chinotevera chetinotora cheboka: yedu yepamusoro yemahara iPhone mitambo, yakapihwa pasina huwandu, kusanganisira zvese zvenguva yakareba yeklasikiki uye yakatanhamara yekucheka-mhedzisiro yakaburitswa. Takatobatanidza mutambo weVR kwauri ... hausi rombo rakanaka here?
Iva itsva vhiki ino: Simba Hover: Cruise
Simba Hover: Cruise ndivatambi vatatu vasingagumi (zvakanaka, surfers) pamutengo weimwe. Iyo inokwereta mauto emubhodha mauto kubva kune akaisvonaka, akanaka Power Hover, uye kuwedzera pamusoro pavo. Iwe unofanirwa kukurumidza kupfuura nepiramidi yebhooby-yakabatanidzwa, dzivisa projectiles yakasvibisa nzira yako neyemutsara wakatsamwa iwe uri kudzingira mumugwagwa, uye unofamba-famba nechitsiko chinopinda mumakore.
Uyu ndiwo mutsara wakanaka, une mavara asina kumira uye asingasviki, asi zvinhu zvine simba uye nzvimbo. Izwi rakanyanya kunaka, zvakare - iyo inokurudzira electronic soundtrack kukukurudzira iwe.
Kune mimwe michina yakawanda: mitambo inogona kupedzisira yapera nekuda kwekuoma kwema spikes, uye maitirwo anotanga kutaridzika sedutu. Asi isu takakura tichida inertia, iyo inoparadzanisa Power Hover: Cruise uye inoita kuti inzwe seuri kufambisa pamhepo. Kana iri dambudziko, shandisa nguva uchidzidza njodzi uye uchiziva mutambo, uye iwe uchakurumidza kukwira mapafura akawandisa.
Finger Smash iri yakawanda kana shoma whack-a-mole nemichero - uye hombe ol 'danho rekufa kamwe kamwe. Iwe unowana miniti yekudyira kuparadza tappy, yakakamurwa kuita masekondi-akareba kutenderera.
Muchiitiko chimwe nechimwe, iwe unoudzwa zvishoma kuti chii chaunofanira kuputika, uye unotanga kuronga kufanana se maniac. Ita chinhu chakashata, uye mutambo wako unopera nehenya rinopisa rinokuseka. (Kupedzisa mumin'i yakazara zvinoshamisa zvinoshamisa.)
Ichi chinhu chakashamisika chepamusoro-chechi chaser, uye saka pane zvinonzwisisika kwete zvakawanda zvekudzika pano. Zvisinei, kune zvakawanda zvekubata zvakanaka. Zviratidzo izvi zvine chitubu chekare, uye mimhanzi inonyatsoshanda nesimba.
Asiwo, pane nzira yaunokwanisa kutamba nayo kuburikidza nezvinhu zvakawanda, bhomba iro rinotaridzika mumashure gumi ekupedzisira, uye yakasiyana nedzimwe sarudzo kana iwe uchinzwa kudiwa kwekubvisa vakuvadzi venzvimbo, kudya kwekurumidza, kana kuti makaroti emakatekwi akanaka. Great stuff.
Spin Addict ndiye mumhanyi asingagumi akaiswa munharaunda yekusingaperi kwemashandi ekugadzirwa kwemabhiza nemashizha. Iwe unodzora chidimbu chesimbi yaunenge uchitarisa nekusvetuka, uchizogunzva kuti usvetuke, uye iwe unofamba pasi uchienda pasi pasi pasi pako.
Munzira isingagumi, inotambidzwa muchitarisiko, unoedza kuwana kusvika pamunogona napo - zvinorehwa zvakanyanya kudarika zvaitwa apo masimbi makuru emichina anogara achida kukugadzirisa, uye simba rako rinofanira kugara richizadza nekubata zvigaro zvegoridhe.
Kunewo 15-level Challenge mode, iyo inobuda kunze kwenyika. Izvi zvakanyanya pamusoro pekufamba-famba - kusvika kumagumo emhando imwe neimwe yakanyatsogadzikana, yaunganidza zvigadzirwa zvakawanda sezvinobvira munzira. Kunyange zvakadaro iwe unotamba, Spin Addict iyi inonakidza yepurogiramu inonyatsotaridzika kunzwa (bhura zvidzidzo zvisingadzivisiki, zvingabviswa nokuda kwe $ 0.99 / 99p / AU $ 1.49).
Dzvanya! iri jumper risingagumi nechishuvo chendaneti - zvishoma nezvishoma sezvo muparidzi wayo anenge achienda. Bhora reziso mbiri rakabatanidzwa kune imwe nyanzvi yakagadzirwa nenyeredzi yakawanda. Chero pose paunobata chinyorwa, hero inofamba nenzira yakatarisa.
Iyo nyoka iri kurova nyeredzi inonzi spiked inotsvaira kukurumidza kwekuparadzwa - sezvinobata kune chimwe chinhu chine mutsvuku. Pakutanga, izvi zvinoreva kusvetuka pamasera machena, nekudzivirira kusingafungidziki kwechimbichimbi, asi nguva isati yasvika, nyeredzi inotanga kuvhara mhando dzose dzekuuraya bhora zvinhu nenzira yako.
Iwe unogona kurwisana zvakare nekubata simba kumusoro uye kuputika mabhena machena e projectiles, uchidzingirira kaviri maphikidzi makuru - mangani machena machena iwe wawa, uye iwe uri kure kure nenyeredzi. Dzvanya! iyo inobvumirwa kunge imwe nyota, asi pacy, chaotic gameplay zvikumbiro zvakanyanya munguva shoma shoma.
Yakagadzirirwa Kukurumidza iyo inotsika-pasi pasi nemifananidzo yakawanda-yekare-yechikoro, uye drag-and-drop track editor. Ita mhando uye yakawedzerwa padziva mutambo wacho unongotora kubva panguva yaro-nhanhatu mini-tours; vamwe vashandisi ndivo vanopikisa, uye iwe unofambisa 'mweya' yavo.
Kutakura zvisiri nyore - iwe unoisa kuruboshwe kana kurudyi. Kukunda kunonyanya kutsvaga kutsvaga mutambo wekutambira, kwete kuvhara mumatairi kuruboshwe rwomugwagwa mumugwagwa, uye kwete kukurudzira zvikuru.
Pakutanga, zvakadaro, mutambo wacho unogara wakashamisika kana mumwe munhu akatora murayiridzo kuti aite "zvikuru 80s" nekuita kuti iite semotokari inotungamirirwa ne octogenarians. Asi zvishoma zvinovandudzwa mushure mezvo zvose zvinowanikwa zvakanaka.
Iyo chete nyoka inofambisa iyo inotambisa maitiro isingashandisi nguva dzose, ichikugadzirisa pamakumbo emotokari usina chaunopikisa. Kunyange zvakadaro, kunyange kana iwe ukatora kurira kuridza, imwe shanje inongogara iine madzinza mashoma nzira.
Knight saves Queen i-turn-based puzzle puzzle game, yakagadzirwa nekwenyuka ichikwira pamusoro pebhokisi re chess. Anofamba muchidimbu 'L', achida kubvisa vadzivisi vese pabhodhi, vasati vadzikinura vahosi.
Pakutanga, iye anongotarisana nemakumbo, asi munguva pfupi dzimwe zvidimbu zvinopinda mukushaya simba, zvichikumanikidza kunyatsoronga nzira yako. Nokufamba kwenguva, zvibatanidzwa zvinowanzoonekwa, zvichikubvumira kuti uwedzere kushandura kushorwa, izvo zvinotapudza chero mukana wose unowanikwa.
Kubwinya kwechimiro chemutambo pamwe chete ne smart smart design inoita kuti ive yakanaka freebie fare for mobile. Tinoita, zvisinei, tisingatauri patinenge tichida kumhanya kwakakwana pamatanho ose akaiswa kuti azarure inotevera - kunze kwekuti, chokwadi, iwe unotenga mari kuburikidza neIAP.
Kunyange zvakadaro, kana pasina chimwe chinhu, izvi zvinokumanikidzira kunyatsogadzirisa mapeji ose, panzvimbo pokupisa kuburikidza nehuwandu hwekuedza.
Flick Soccer ndezvekufungidzira zvinangwa nekurota bhora nemunwe wako. Inoratidzika kunge yakangwara kwazvo, ine maonero echokwadi chaiwo uye nemaoko arcade-y ball kufamba. Iwe unogona kusunungura zvakanaka shots shotswa apo iwe unotarisa kune zvinangwa, uye pane dzimwe nguva gadzira chidziviriro.
Mutambo unosanganisira mamwe maitiro emamwe, zvichipa kuwanda kwezvishamiso zvakasiyana-siyana pahurukuro inokosha. Pane kusarudzwa kwekukurumidza kunosanganisira kubhururuka pamhepo inoshatirwa, uye iyo inononoka-yekufa kweUniyanzvi, iyo inogumisa kuenda kwako mushure mokunge vatatu vakundikana kuedza kurwisa chinangwa.
Asi pane imwe nzvimbo yeusoteric inokurudzirawo, ichikumbira kuti iwe ugare uchirova musasa, kana kuti kupwanya mapeji egirasi munhu wepenzi akaisa mu goalmouth.
Kufanana nemitambo chaiyo-yenyika paTV, Flick Soccer inenge yakazara-yakazara. Iwe unokwanisa, zvakadaro, kubvisa zviziviso ne-one-off $ 0.99 / 99p / AU $ 1.99 IAP, kana - zvisingadikanwi-vadzidzise kwemaminitsi gumi kuburikidza nokutarisa mutengo.
Drop Wizard Tower is a superb mobile take on classic single-screen arcade platform games like Bubble Bobble. Mudiki wako wizard akaiswa mujeri neakaipa Shadow Order, uye anofanirwa kukwira shongwe pamusoro pezvikwata zve50 kupa vavengi vake zvakanaka 'kutsika' (kana chimwe chinhu.)
Izvo zvose zvinonakidza, ne dinky pixelated vavengi, zvakasiyana-siyana kugadzirwa (skiddy ice; kupera simba mapurisa; mvura inobhururuka umo iwe unofamba zvishoma nezvishoma), uye vabati venguva refu vanorwisana nevargantuan vavengi.
Chinonyanya kukosha, chakanyanya kugadzirirwa kushandiswa. Iwe unofambisa motokari kuruboshwe kana kurudyi, uye unopisa magetsi paunenge uchisvika pachikuva. Izvo zvinoputika zvishoma nezvishoma zvinokambaira vavengi, izvo zvinogona kubviswa kure, zvichiva chekurova 'avalanche' pakukwikwidzana nemakwikwi.
Iko-run-bit inoparadza pakutanga - mumitambo yakafanana yakafanana, protagonist inoramba ichishandiswa kunze kwekuti iwe uchengetedze bhodhi rinotungamirirwa. Asi kana ma mechanics achinyora, Drop Wizard Tower inogadzirisa pachayo sechikamu chiduku chemashiripiti pa iPhone yako.
Izvi zvinobva kune zvakaitika kare (zvePC kumitambo) zvinotarisa semhare, asi kazhinji zvinonzwa sokuti iwe uri kusvuta nyama-kunyange zvazvo yakasungirwa muchitsiko chekukurumidza.
Aya maasnas ehurukuro anokuwana iwe mune ramangwana reDystopian apo vanhu nemhou dzinoputika apo apo vanodzingwa vanodzingana vanoputirana. Kukunda kunosvika pakuzadza zvikwata zvinokwana, kuputira vese vadzivisi vako, kana kukura pasi zvinhu zvose zvipenyu munzvimbo.
Mune 1990s, izvi zvaishamisa kusvika pakupedzisira Carmageddon kubvumidzwa mune dzimwe nyika. Nhasi, kurwisana kwe-lo-fi kunoratidzika kusinganzwisisiki. Asi mutauro wemutambo-mu-cheek unofara huripo, wakagara zvakanaka pamwe nepasikisi ye-bouncy, madcap-t-ra-racing, uye vaseki vanosemesa vachiedza kukuputsanidzai mukunze kana iwe uchiyambuka nzira yavo.
Rimwe Tap Rally anodonha top-down mobile racer mumushandi mumwechete. Dhinda pikicha uye iwe fambisa; rega uye iwe unonoke pasi. Mune nitros mode, iwe unogonawo kutambanudzira kumusoro kune imwe nguva yakawanda yekukurumidza.
Inonzwa sezvakaita slot-racing, asi nzira idzi dzakasikwa uye dzakasununguka, panzvimbo pezvakagadzikana zvinyorwa zvepurasitiki. Kudzidza kubheta imwe neimwe uye kururamisa kunokosha kuti uende-pota usina kurova mativi - zvakakosha nokuti kukakavara kwakadaro kunokutorerai masekondi anokosha.
Iwe hausiwo woga - One Tap Rally inokutengesa iwe pamhepo dzemuInternet dzevamwe vatambi. Nguva imwe neimwe iwe paunokunda chikamu chako, unovandudza mararamiro ako panzira ino, yakagadzirira kutarisana nevashori vatsinye. Izvi zvinopa humwe hupamhi hwehupamhi kune izvo zvakanga zvatove zvakanakisa, zvinogona kutamba zvemajeri racer.
Crazy Taxi inzvimbo yezita rakakurumbira uye rakanakisisa raRotcast / arcade musoro kubva ku1999. Iwe unenge wakakomberedza vhidhiyo yevhidhiyo inotora kuSan Francisco, uchizvikanda iwe kubva kumakomo makuru, uchikwira mumhepo sekunge teresi yepenzi chete inogona, uye nguva dzose inoputira imwe motokari kunze kwenzira.
Kupiwa 'taxi' bit mumusoro, mari inokosha. Kuvawana kwavanenge vachida kuenda munguva yakanaka kunodzokorora awa. Vakashevedze uye iwe unopiwa mabhonasi. Enda 'crashy' panzvimbo pane 'kupenga' uye iyo inotora inotora mikana yavo uye ichitsvaga kunze kwekamuri yako, ichisiya iwe pasina mari yavo.
Crazy Taxi inoratidzika zvisina maturo, asi ichiri kutamba zvakanakisisa, uye kunyange kutonga kwekrini kunoshanda zvakanaka kwazvo. Nokuda kwekusununguka, iwe unofanira kunge uri paIndaneti kutamba, zvisinei-iwe chete chisiko chisiko mune imwe nzvimbo inofadza (uye iwe unogona kubvisa neIAP).
Ehe Bunny iyo inonakidza yemutambo wekugadzira ine ruvara rinokurumidzira, iyo inopisa pamwe chete munyika ye cartoon, kuunganidza karoti, kubata zvigetsi, uye kuedza kusakarovererwa pamatafura akawanda asingakanganisiki dolt akasiya kureva nhema pamusoro.
Mutori wemotokari, saka rinodzora kubika pasi kuti uise piriniti kuti udzike panguva yakafanira. Izvi hazvo zvinokupa uwandu hwakawanda hwekutonga, zvakadai sekaviri-kuruka pakati pemhepo kuti uwedzere kure, kana kuti rusvingo-kuruka se bunny ninja.
Mutambo wacho unotarisa zvikuru, uye hune huno hwakanaka hunobata sezvinoita utsi hunotevera mushure. Uye kunyange zvazvo zvingave zvinogumbura kana hero inenge yakatsvayamiswa zvakare, iwe unogona kugara uchienderera mberi nekutarisa chikwata kana kupinda mukati mako chekuchengetwa karoti.
In Hove & Rwendo, iwe unorayira hove imwe chete inosemwerera, uchifara kushambira mumvura yakadzika. Uchishandisa munwe wako, iwe unotungamirira hove kune mazai uye kune mamwe magweta, ayo ekupedzisira ayo anobatana newe kuti uite zvishoma nezvishoma chikoro. Zvinosuruvarisa, zvinhu zvose zviri mugungwa zvine nzara yehove yekudya.
Pakutanga, iwe uchaona anemones spiky uye dzimwe nguva hove dzisina kuchena dzine mazino makuru. Asi pakupedzisira, iwe uchange uchinge uchinge uchinge uchitarisa kuburikidza nemagungwa e-claustrophobic, uchiedza kutsva shamwari itsva kuchengetedza chikoro chako chiri mhenyu, nekudzivirira mashanga makuru anoratidza kusvika kune musoro kubva kuJaws.
Zvese zviri nyore, uye zvinogona kupedzisira zvaora. Asi munguva pfupi zvirinani, Hove & Rwendo ndeimwe yeayo anoshamisa uye asingawanzo mitambo yeApple yakavimbiswa kwazvo kunamira kunyemwerera pachiso chako.
Topsoil, senyaya yaro yekurima, chimwe chinhu chinoshanda chaizvo kana iwe uchida kuisa mukutsvaga. Uye izvi ndezvokuti ipuzzler iyo iri nyore kunzwisisa mukati memaminitsi mashoma, asi iyo inopa mubayiro wenguva refu, sezvo iwe unononoka kushandisa nzira itsva dzekuwedzera mitambo yako.
Bhodhi iri gadhi-ne-mana gridhi, mauri kuwedzera mbeu. Zvose mana dzinoita kuti iwe unogona kukohwa muti - kana boka rezvidimbu zvakasvibira - izvo zvinoshandura ivhu. Nzira isinganzwisisiki yakakurumidza kukusiya iwe nemasikisi asina kubatana uye hapana mukana wokubvisa zvitoro kamwechete.
Kunyangwe kana uchigadzirira mberi, mutambo wacho unowanikwa nenzira yakashata unogona kukurumidza kupedza mutambo. Asi ruzivo rweStopsoil nekuderedza-kudyisa kwezvinhu zvitsva kudyara kunogadzirisa zvinokonzera kusununguka nekugara kwenguva refu-teaser yakanaka yekuzadza nguva dzenguva.
Pane zvakawanda zviri kuitika mu3D racer NASCAR Heat Mobile. Ikoko kunomhanya, zvinonzwisisika, izvo zviri nani zvakanyatsoitwa. Iwe unozviwana uri pane ovha yemarimac, uchiedza kutsika uye unovhara nzira yako kuenda kune checkered mureza, kudzivisa mhomho inotyisa mumugwagwa. Izvo zvose zvinotarisa panzvimbo yakachenjera, kunyange kana kufamba kwemotokari kunowanzofungidzira; hutungamiri huri nyore uye hunopindurawo zvakare.
Kubva pamitambo, unogona kupinda mune meta-mhando yemhando, kuisa zvivako kuunza zvigadziro zvinotsigira dambudziko rako rechikwata chechikwata. Izvi zvingava zvishoma zvekuvhiringidza, asi kunowedzera kudzika kumutambo.
Uye apo iyo yose yepakiti haibati kenduru kumapikisa madcap muzvinodiwa zveAsphalt, inoshanda zvakanaka kana iwe uchifungidzira uchikurumidzira pamwe nenzira inenge yakanyanya kugadziriswa.
rvlvr. iri mutambo wakanyanya kubvisa. Pasinei nepayano inonakidza soundtrack uye zviratidzo zvakajeka, hazviiti sechinhu chinokosha. Iwe unowana boka remitsara inopindira nematombo, uye unofanira kusarudza uye kuivashandura kuitira kuti pikishamba ifanane nechifananidzo kumusoro kwekona. Easy!
Rvlvr chete. hazvisi izvo. Kana uchinge watopisa kuburikidza nemazinga okutanga, zvinhu zvose zvinova mite zvakanyanya kuoma. Iwe unopedzisira uchitarisa hafu yegumi nemaviri kana kupfuura zvindori zvine madhishi akasununguka zvakasvibiswa pamusoro, kuziva kushanya kumwe chete kunogona kukanganisa zvinhu zvose zvaunosvika pane izvo zvakashanda zvakaoma.
Iyi kusanganiswa kwekufambira mberi uye dambudziko, pamwe nehuvlr's elegance, icharamba yakadzika kumusha wako. Uye kuti iwe unogona kutsika chero humwe husanganiso hwePCN (!) Hune hutano hwakanaka, kuve nechokwadi kuti haungarambi wakabatanidzwa pachiitiko chimwe chete iwe haugoni kutora musoro wako wakakomberedza.
Kune chido pamwoyo we Yakazara Nyeredzi, izvo zvingangodaro zvave zvichive zvakadaro imwe mhanya-ye-the-mill tap-based kupona game.
Nguva yako yakawanda inopedzerwa mumatenga, kutora mapuranga eefodhi kuti urege kubvisa chikepe chako kuburikidza nemafuta emhepo. Kana zvichikwanisika, iwe unokonzera kushivirira kukweresa zvombo zvako zvehurumende uye huwandu hwehuputi hunokuvhundutsa kuenda kune yako kuenda kune imwe nguva yakakurumidza.
Asi Nzere Nyeredzi zvakarewo mitambo yemitambo yemitambo, zvichikuwana iwe uchibhabhatidza muchigadziro chinoisa humunhu pamucheto. Pamwe neunyanzvi hwako hwekudhika, iwe uchada kutarisira zvigadziro uye uite zvisarudzo zvinokosha kuti uone kuti iwe uripo.
Inogona kudzokorora, uye zvikamu zvekudenga zvinenge zvisingabatsiri, asi Nyaya yeNyeredzi iri kuedza kukurudzira mukuedza chimwe chinhu chakasiyana-rwendo runotungamirirwa nenyaya runoda kuti zvose zvigadziriswe uye zvigadziriswe zvakanaka.
Swordigo iyo tsamba yorudo kune yekare-yechipfuva-kupumburuza adventures yeropafadzo iyo yakakomborera 16-bit consoles. Iwe unokwakuka pamusoro pezvikwata, sanisa kumusoro nevavengi nebakatwa rako rakavimbika, uye ona nzira yekugadzirisa puzzles nyore, iyo inozarura nzvimbo itsva yemutambo uye inoendesa mberi chigarire.
Chirongwa chacho, ndechokuti, hapana chinhu chakakosha - uri kutanga rudzi rwekutsvaga kwekutsvaga kuchengetedza uipi pane iyo inowanzoshusha mashuga evhidhiyo. Asi zvimwe zvose pamusoro peSordigo zvinopenya.
Izvo zvipfeko zvekutonga zvinoshamisa kuti zvakasimba, mamiriro acho ezvinhu anonakidza zvakasiyana, uye kufamba kwakadzika kubva panguva dzakanaka dzorugare dzoga kuhondo dzakasimba dzemashandi iwe uchaomerwa kuti urarame. Zvose mune zvose, zvino, mutero wakakodzera kune avo vakawanda-vanodikamwa mazita ekare.
Zvinoratidzika kuti tatoenda padhesiro apo kuunganidza mabhokisi kunofungidzirwa sehurukuro inogona kugadziriswa yemutambo weIOS. Zvinoshamisa, zvisinei, Tepi nayo Up! chikumbiro.
Iko kunotora pamusana wekusagadzirisa mabhanhire ekutengesa, uye newaini yako huru inokwakuka kubva bhokisi kuenda kunebhokisi apo iwe unofamba. Zviri nyore kunzwisisa, asi zvakasimba kupona apo zvinhu zvose zvinofamba pa breakneck speed.
Tora mari yakawanda uye iwe unosvitsa vatengi vakawanda vanopa evoteri vanopa mutambo unoperera pamucheto. Iwe unogona kugumisa kuvhara mabhokisi nemukaka, apo mhou dziri kumashure, kana kudzora chiduku chema-console-svondo apo inotaridzika-inotaridzika 'em up inokuseka iwe pachako uchitamba iwe pachako.
Aiwa zvakanaka - munhu wose anoziva kubata mabhokisi zvinonakidza kudarika kuputika mumhepo, zvakanaka?
Kutamba bhora uri iwe pachako kunogona kunge kusina kunaka - kureva, kunze kwekuti iwe uri gamba remitambo ye Footy Golf. Sezvakamboitika, kuisa chinangwa chikuru-uye kune chinangwa chekuwanika pane imwe nzvimbo pamudzidzi mumwe nomumwe. Asi munzira, iwe unogonawo kuunganidza mari yemumwe munhu akasiyiwa akamira akarara.
Izvo zvinotungamirirwa zvakananga (chinangwa nemutsetse wemutsetse wozorega kubvarura); zvakawanda zvezvinetso zvinouya mukuedza kuwedzera nyanzvi yako nyeredzi kuburikidza nekusvika pakakosha uchishandisa zvishoma zvingaita kukakurwa. Iwe unotofanirawo kufamba nenzira dzakaoma zvakadzika sezvaunofamba uchienda muguta, mabhavha, firita, uye gwenzi rinopisa.
Mutambo wacho unonyanya kufambiswa, ane unhu hunovhiringidza hunyoro hunokurudzira kugema, asi huri kutorwa muzvinyorwa zvitsvuku, zviri pachena kuti 'mutambo unokunda' kupfuura 'chinangwa chako'.
Unoziva kana tsananguro yose yeChitsuwa yeChitsu ye "game" inofadza "chigunwe chechigamba-mutsara" iyo iwe unenge usingave uchienda kune musoro neoodles yekudzika.
Uye saka zvinoratidza kuva ne Jelly Juggle, icho chinonyanya kana chiduku-chinomwe chichitora Pong chaunotamba iwe pachako.
Pano, hove duku inoshambira mudenderedzwa pose paunenge uchinyora pikicha, uchida kuchengetedza jelly yechirati mumutambo. Kana iwe usingafungi kuti zvakaoma zvakakwana (uye, pachena, iyo-iyi yemutambo inofanana nejuggling nekukurumidzira), mbavha dzinozopedzisira dzakapinda mukati kuti dzigadzirise nyaya, uye maitiro matsva akavhurwa apo uri kutengesa jellies akawanda.
Chinyorwa chakareruka, ipapo, asi chimwe chine nguva (inopa kuti zviri nyore sei kunzwisisa) uye kusagadzikana. Uyezve, mitambo yakapfupika zvokuti iwe unogona kunge uine mamiriyoni akaedza kurova chikwata chenyu chepamusoro paunenge wakamirira mumugwagwa muchitoro.
Inogara iri nzira: ndipo iwe uri, mage, uchipa zvinhu zvose zveguta rako rinowedzera zvinyararire, apo ruckus kubva kune imwe sarudzo inokonzera bhabheri yechinhu chakakosha kuti chiwire mubhokisi rako, ichikusimudzira shongwe yako nekukuita iwe living skeleton. Chinodiro Chishanu, chaizvoizvo.
In Just Mapfupa, skeleton inoratidzika kunge iri mumhando yeGroundhog Day, kuunganidza zvikamu zvake zvakasiyana-siyana kuduku duku remitambo yenyika ye2D, tisati tambozvipinza mune imwe nzvimbo uye tichidzokorora chiitiko pane imwe nzvimbo itsva.
Izvo zvose zvinyengeri, asiwo inoverengeka inotora pamutambo wechikwata; uye kune avo vanoita shanduko, pane zvimwe zvakasimba zvakasimba zvinokurumidza kutsvaga kurohwa.
Munharaunda iyi inotungamidza, chigaro chegorodhe Yobot chinotarisa pamusoro pemakamuri emvura mukati me robot plant plant. Uchishandisa simba rake-risina simba rekukwira uye nekukwanisa kumira zvishoma, iwe unofanira kumubatsira kune kubuda, kubata switch uye makii munzira.
Chimiro chekumira Yobot Runha yakanzwisiswa newe iwe chete unenge uine simba risina kurega - iwe haugoni kugara imomo kwenguva yakareba, wakamirira nzvimbo inofambisa kuve yakadaro.
Mugumisiro mutambo apo iwe unogara uchinyanya kutsvaga nzira inoenda kune imwe nzira inotevera, uchiedza kudzivisa kusafa kune imwe yematambudziko akawanda emiti.
(Kunyange zvazvo, pachena, mumwe munhu anoda kuva neshoko nemuumbi wehuni, achipiwa nhamba yemapikesiti iyo michero ine, uye kubuda kusingakwanisi kusvika mapurisa.)
Kunyange zvakadaro, pachikamu chayo, iyi inofananidzwa nemaitiro-based-survival game (swipe kuti usapinda mutambi; usaparara), Dashy Crashy ine mitoro inopfuurira mberi kwepasi. Yakazara izere dzakanaka, dzakadai semisungo-ups, zuva rakanaka / usiku, uye zviitiko zvisingashamisi zvinosanganisira maniacs zvinokuvadza mumugwagwa, zvichipwanya zvinhu zvose kubva munzira yavo.
Icho chinowedzerawo kuwedzera kukosha kwekufambisa mitambo yekutamba kuti iwe uunganidze zvinhu. MuDashy Crashy, iwe nguva nenguva unopa motokari, asi izvi zvinowanzozunguza maitiro aunoita mutambo. Somuenzaniso, imotokari yemotokari inogona kuunganidza mashizha makuru emakona emabhonasi, uye jeep yehondo inogona kudana mumatangi - sezvamunoda iwe unogona kuita kana wakanamatira mumigwagwa inononoka-kufamba.
Kusungira dutu rePlastiki pamusoro peicho hachisi chikonzero chinonakidza chemutambo, ndicho chikonzero kushamisika Frisbee Nokusingaperi 2 Zvakanaka. Mutambo wacho unowana kuchechecheka kwechikwereti pamwe nemigwagwa yakafanana nemigwagwa, inofamba mukati mezvivako nematanho, uye ichikwira kumusoro pamusoro pemakomo akafukidzwa nechando uye kuputika kwemakomo.
Iwe unongotora kuruboshwe uye kurudyi, uchiramba uchikwira nekuunganidza nyeredzi, nekudzivirira njodzi pamatambudziko ose - zvisinei iwe Frisbee wako anoenda 'donk' uye anowira achisuruvara pasi. Tora kubheta zvakakwana uye iwe usvitse zvikamu zvitsva uye Frisbees.
Uyu mutambo ungadai wakave dambudziko rinokonzera, asi pane zvazviri. Zviratidzo zvinoshamisa - zvinopenya uye zvine simba - uye zvidzidzo zvakanyatsogadzirwa. Uye kunyange kana iwe ukakundikana, Frisbee Forever 2 lobs mari yako nzira yako, uchipa mupiro chero upi zvaunoedza iwe.
Pixel Craft havatore vasungwa. Kwete kana uchinge wawana tsoka dzako mudiki yako yekutsvaira gorosi chipfeko kupfuura mazana evatorwa vanokurova iwe zvakawandisa stardust.
Pasina nguva, iwe maawa masangano uye vavengi, dzidza kuvhara miseve mikuru inodzingwa nenzvimbo yakawanda yekombe, inoratidzira kuti ungadzivirira sei kamikaze ngarava, uye uone kuti ungakwanisa sei muvengi anenge achida kupinda mukati, akarasikirwa neAccade classic Caterpillar. Ipapo iwe unotarisana nehosi huru uye unotinhira zvakare.
Icho chigamba chekutanga pakutanga, zvino-kunyange grindy. Asi Pixel Craft ine pfungwa yekuseka uye yekukurumidzira iyo inoita kuti inakodzerane. Iro aesthetics uye kutonga zvinonakidza, uye rufu nguva dzose inonzwa yakarurama - kupiwa mhosva paminwe yako kukundikana.
Asi nekutsungirira kunouya kunounganidza kuunganidzwa nekudzikisa zvigadzirwa. Zvino iwe ndiwe unodzinga zvidzidzo muraery kufa!
(Zvishoma kusvikira uchingosangana nomubatsiri anotevera.)
Zvichienderana nenzira yako yekuona zvinhu, Narcissus inenge iri yega yepuratifomu yemutambo kune imwe kana inonakidza 50-level yakashata game for two.
Nheyo dzenheyo dzinonyanya kutarirwa mumutambo Canabalt - Narcissus anokwira achibva pachikuva kuenda kunzvimbo, kuti arege kuwira pasi uye aende splat. Asi kana iwe uchiyeuka nhoroondo dzako dzechiGiriki, Narcissus aiva nechiratidzo; mumutambo uyu, kuratidzika kunoonekwa pahwindo.
Iyo nyoka ndiyo nyika umo vanhu vaviri vakagumbuka havasi girazi chinyorwa. Kune mumwe chete mutambi, izvi zvinokonzera dambudziko rakaoma, kuchengeta nhamba mbiri duku, avo vanowanzoda kutamba panguva dzakasiyana. Newe shamwari, zviri nyore, chero bedzi iwe usingadi kukanda iPhone yako pane girazi kana mumwe wenyu achinyanyisa nguva-kuruka.
Kana iwe wakamboita Super Dangerous Dungeons, iwe uchange uchiziva nyanzvi yemutambo Jussi Simpanen anoziva nzira yekugadzira mutsara wepaguru. Kunyange zvakadaro, Nyeredzi Yemwoyo inoratidzirwa kushandiswa kunobatsira.
Iwe unotungamira kutungamirira shamwari mbiri kune chinangwa mune imwe neimwe ye60 duku shoma-skrini mazinga. Mafuta aya anowanzokombwa nemapuratifomu, mapikisi, uye kushanduka-uye izvi zvisati zvaitika iwe uchitarisa madonhwe akaipisisa mumhepo isina chinhu. Uyewo, kazhinji hazviiti nzira yakajeka yekuti vose vasvike pakuzadzisa.
Iko musoro-scratcher kusvikira watanga kushandisa Heart Star's-swapping. Shandisa bhodhi kuti uchinje unhu, ipapo dzimwe shamwari dzemauto dzinopera. Nekubatanidzwa kwehupfungwa, kubvisa manwe-basa, uye kuva neshamwari kushamwaridzana-kazhinji nekunamatira pamusoro wemumwe - mhinduro inofanira kuzvipa iyo, ichikubvumira kuti urambe uri parwendo rwako.
Ndiyo imwe nzira inopenya-yokupona mhepo inopera isingaperi, uko iwe uri kuteverwa nenyika-kudya zvakaipa, asi Remedy Rush iyo inoverengeka munyaya dzenyaya uye nzira iyo inotamba nayo.
Zvinhu zvinokosha zvinowanzozivikanwa: iwe unotungamirira protagonist nekusvetuka pamusoro, uchida kuchengetedza mberi kwekuregererwa kwako kusingadzivisiki kwenguva refu zvichibvira. Asi muMuchirongwa Rush, iwe unotamba semugadziro wekuedza (akadai sekiki kana magirazi ezuva) achiongorora muviri wegridi-wakatapukirwa.
Sezvaunofunga pamusoro, zvinodhaka zvinoparadzwa kuti zvizarurire nzira, uye utano hunoputika hunogona kuunganidzwa kuti ubudise chero masero uye majeremusi ari munzira yako. Nokufamba kwenguva, mutambi wacho anowedzera kurwara uye fivhiri inotyisa; apo kuguma kwasvika, unogona zvakare kuedza nemishonga mutsva, mumwe nomumwe ane mhuka yake-inochinja rutivi-iyo.
King Rabbit ane mamwe unorthodox vavengi. Vakatora zvinyorwa zvaro, vakati vavengi vakavatsanangurira grid-based worlds ivo vakazadzwa nemisungo yakanyatsogadzirwa.
Kazhinji, uyu ndeye kufunga-mberi puzzler, ine mitoro ye Sokoban-style bhokisi slide. Asi panzvimbo yekutsvaga zvakasununguka, King Rabbit anowedzera zvikamu zvakasvibirika-based arcade, uye iwe unomhanya kubva kune zvisikwa zvinotyisa zvakagadzirirwa mutsara.
Zvechokwadi, ichi hachisi chinhu chipi zvacho chausati wamboona, asi Mambo Rabbit anotonga kuburikidza nekuurawa kwayo. Kutarisa, zvinhu zvose zvakanyatsonaka, kubva kune zvakajeka, mavara akasiyana-siyana kune hero inoshamisa (uye jig duku yaanoita pakununura chum). Asi puzzles ndeye masimba chaiwo, kupa huwandu hwakakwana hwekurumidza uye huropi-kupora.
Ichi hachisi chinoshamisira, kana kunyange mutambo wemujahwo - saka, urombo nekukumanikidza iwe mukati neizvozvo. Pane kudaro, Freaky Racing ndiye mumhanyi asingagumi wemarudzi. Nezviratidzo zvinoita sokuti zvakakonzerwa kubva ku1981, mutambo iwe unotakura motokari yakasviba yakawanda iri pamwe chete nepamusoro pekufema. Dambudziko nderokuti iwe hauna mabheki - uye zvinhu zvinokurumidza kwazvo nokukurumidza.
Pasina nguva, iwe uri kuputira kuburikidza nechicanes, uchidzivisa kutengesa kwemajaini ako, uye uchiedza kusaenda pedyo nemigwagwa yemugwagwa, iyo inoratidzika yakagadzirwa kubva kune imwe rudzi rwezvinhu zvinoita motokari pakarepo kuputika. Mikana ndeyekuti, haungagari kwenguva refu muFaraky Racing yenyika isinganzwisisiki, asi iyo musoro unonyanyisa unoita kuti uchengete iwe uchidzoka kune zvimwe.
Pane zvishoma zvekubiridzira zvinopinda mukati Moversess Chess. Kunyange zvazvo muvengi wako ari kutamba mitambo yakazara, iwe uri rudzi rwewizard uye zviri pachena hausi kuda kutambudzwa kwekufamba-famba.
Pane kudaro, iwe une zvishoma zvishoma zviito, izvo zvinoshandiswa kuchinja zvikamu zvaunenge wava nazvo pabhodhi. (Saka, somuenzaniso, nematatu, iwe unogona kuchinja noupenzi pawn mu knight.) Chinangwa chinoramba chiri kutambira mitambo, uye, zvichida, kudzivisa kuora kwevako vasiri mashiripiti.
Icho chess seye puzzler, ipapo, uye nechinokanganisa icho chichaita kuti veterans vemutambo vamire uye funga nezvekufamba kwenguva chero ipi zvayo.
Pashure pezvose, paunopinda mukati mematambudziko emutambo, unogona kuwana masimba ekuita mashizha kwete nguva dzose kuti uwane kukurumidza kukurumidza kana iwe usingagoni kutamisa zvidimbu zvako.
Isu tiri rudzi rwunharaunda ye Crossy Road pano, asi panzvimbo yehuchi inofamba mumugwagwa usingagumi wemigwagwa uye nzizi, Redungeon anowana kambani kaduku rakakanganiswa mujeri risingaverengeki rakazere nemisungo.
Chikwereti kuna ani zvake aida kuita kuti ruzivo ruitwe, nokuti akati misungo inosanganisira nzira dzisingagumi dzokudzivisa kuuraya mumwe munhu, kubva pakukanda mabomba eGoo kusvika kune mashizha esimbi masimbi akabatana pamwe chete, achikwira pasi munhu wose anotora zvakakwana kuti apinde munzira yavo.
Sezvakamboitika, iwe uri kudzingirwa nemamwe marudzi ezvakaipa zvisingaregi (pano zvinoratidzwa nezvakawanda zvezvipfeko zvitsvuku) uye saka haugoni kumira.
Sezvo zvakadaro, iwe unonyanya kukundikana nekuputira nenzira isina kururama apo uri nekutya, nokudaro kuisa pfungwa yako. Kunyange zvakadaro, tora zvakakwana kubheta parwendo rwako uye iwe unogona kuvandudza unhu hwako (uye usvinudze vatsva), uchivapa mukana wekurwisana - zvakanaka, pamwe nemamwe masekondi 30.
In Icarus - Rwendo rweNyeredzi, iwe unobatsira nyeredzi yakawira inodzokera kumatenga. Kuita chimwe nechimwe chiduku chichikwira kumusoro, iwe unodhonza shure uye unosunungura kuti uwane nyenyeredzi, kufanana neAngry Bird yekudenga. Nokufamba kwenguva, simba rinoshandiswa, nyeredzi yako pakupedzisira inopisa; kuti udzivise izvozvo, iwe unotora nguva mukati meimwe nyeredzi kuitira nokukurumidza kumusoro.
Zvakawanda zvezvinetso zvinosanganisira kubudirira kuburikidza nenjodzi - kazhinji kunyorera maumbirwo aunonyanya kubvisa - usati wapisa kuburikidza nehutano hwako.
Tora orbs zvakakwana munzira uye iwe unogona kureba kuedza kwekupedzisira kuburikidza nekuenzanisa uye kuwana humwe hutano humwe. Kana iwe chete iwe unogona kupisa kuburikidza nemashamba, zvakare, sezvo izvo zvinoparadza runyararo vibe - asi, zvisinganzwisisiki, hapana IAP yeiyo.
Yakapiwa Laser Dog tsika yekuita mitambo ine shungu yakaoma, Usakanda Pakutanga rinoratidzika sekubva. Iwe unodzora katebhenji kadiki, uchiiisa mumhepo-uye kure nemashizha akareba-nekukanda pahwindo uye kusvetuka kuti ufambe zvishoma. Zvakafanana neshoko rakanaka reeepie-uppie - kwemasekondi mashomanana.
Mushure mekupedzisira, gehena yose inosununguka, pamwe nemichero yako inotarisa-farira yekupukunyuka rufu rwunoshungurudza, rwunorwadza nekudzivirira mazamu, mabhoti, nemamwe marudzi ehumwe humwe njodzi dzinoda kupfurikidza kumakumbo.
Unganidza nyeredzi yakawanda iwe paunenge uchinge uri pahwindo uye unogona kuvhura vatsva vatsva. Kana iwe uri kutyisa, hapana maitiro ekutsvaga kukosha kwako kana - IAP chete inofanira kubvisa matanho. Brutal.
Nemivara yakavhara maziso nemapikiseli akaputika, Bhomba reMask rinotaridzika kuti rakapukunyuka kubva kuZX Spectrum, asi iyi yekufamba-famba yakakanuka game game inonyanya kushanda kwemazuva ano. Nenzira imwechete, inonzwa kunge yakafanana nekukurumidza-up uye yakagadzirirwa Pac-Man 256, iwe uchifambisa nemvura, uchidya madota, uye uchienda kune imwe yakaipa-kudya.
Asi hutongi apa ndihwo hunokosha - flick inokukanda iwe mune iyo nzira kusvika chimwe chinhu chichiita kuti iwe usiye. Tine tariro, iyo irusvingo. Kana iri nyoka kana muvengi, wafa.
Iyo nzira inogadzirwa neArcade mode inowedzera kukanganisa kusimba sezvo uchiedza kusvika kumagumo eguva rimwe nerimwe, apo shanho-based mode inokonzera kuputika kweminwe yako ne 60 inenge yakagadzirirwa kugadzirisa zvinetso.
Kana iwe uri fan of kugogodza masimbi ematare pamusoro, iwe unogona kuora mwoyo ne iPhone pinball. Kunyange iPhone iPhone Plus isati iri duku zvikuru, zvichiita kuti chiitiko chakazara chizere nebasa reziso. Pinda PinOut!, iyo inofungisisa zvakare piniki nenzira inoshanda zvakakwana pane zviduku.
MuPinOut's neon-inoputirwa nyika, iwe unotarisana neawa, uchirova zvikwata zvekutumira bhora rako richienderera kune izvo zvinenge zviri pasi petafura yepineball yakareba kwazvo. Panzvimbo pokurasikirwa nebhora kana ichitsvaga mushure mezviputi, iwe unongoparadza masikati mashoma ekudzoka kwawakanga uri. Apo awa rinopera: mutambo pamusoro.
Chigumisiro chacho chinonakidza uye chitsva, uye iyo yakajeka mini-matafura ndiyo yakanaka kune iPhone. Uyezve, kutamba kwemutambo kunoita kuti zvive zvakakodzera kune vose vanoita gamers, kukunda pinball zvishoma zvisingachagoneki.
Imwe yemitambo iyoyo inofara kukudzoka kakawanda muchiso, Nekosan ichisimba isina-screen-platformer. Icho chikonzero ndechokuti mhove dzabiba nyeredzi dzose, uye dzakavanza mujeri. Zvakasvika kune vane heroic Nekosan kuti vadzore.
Iyo nyoka ndeyokuti, kusiyana nemimwe mitambo yemapuratifomu, Nekosan inokupa iwe kutonga nenzira yekugunzva kupi zvako pachikona. Zvichienderana nezvakagadzirirwa kittie, zvakasungwa zvinogona kumubata mumhepo, kumurege achibva pamadziro, kana kumubatsira akasungwa pakati pepakati pemhepo.
Saka iwe unofanirwa kuongorora nzira yekudarika imwe nharo-kufanana nenhare, uchishandisa nguva yakakwana kuti uone kuti jumping feline haina kuurayiwa. Uye apo iwe uchiita, zvakakodzera, uwane hupfumbamwe hupenyu, uchaona kuti dzinopera nokukurumidza zvikuru.
Pakuona, Super Cat Tales rinotarisa sezvarinosvika kubva ku1980s console. Mifananidzo yakajeka, phunky pixels, uye gameplay ine ruzha inokuisa mupfungwa yemu Mario kana Alex Kidd.
Asi kunyangwe Super Cat Tales inopinda iyo isinganzwisisike nostalgia gland, iyo macomputer anoiita yakanyatsoenderana neazvino. Kufamba kwechimiro kunoitika nekutapa kuruboshwe kana kurudyi skrini -batisisa kutamisa kana kaviri. Paunenge uchimhanya, yako yeggie inokwakuka kubva pamucheto wepuratifomu; uye kana uchitsika madziro, tap apa iri mhiri inosvetukira kumadziro.
Pakutanga, izvi zvinonzwa zvichivhiringidzika, sezvinoyeuchidza musumbu zvinorwisana nekutonga uku kwakasiyana. Pasina nguva, zvisati zvamboitika, uku kugadzirwa kwemazano kunobatanidza nehuwandu hwakatakura huzere nezvakavanzika, makate anogadzikana ane unyanzvi hwakasiyana, uye akanaka aesthetics, kuti aite imwe yemitambo yakanakisisa yerudzi rwayo pafoni.
Tsvakurudzo yeMickey yakashanduka nezvose zvinopinda. Pakutanga motokari yakasara-yakatarisa yaMarrun-oriented, yakabva yatanga kufamba-famba nenzira yezvikokovonho zvinoputika, isati yataurira tsika dzetsika dzese, kusunga jet bhoots kuMikey mune rudzi rweFlappy Bird nekirasi.
ne Mikey Jumps, nhepfenyuro ine chinyorwa chayo chikuru. Mipumburu inoparidzirwa inoparidzwa ne, mukuda kwekurumidza-moto isina-screen effort. Iye zvino, Mikey-self-runs, uye iwe unotora muchengeti kuti nguva inomhanya kuitira kuti asagumisiro arovererwa pane spike kana kupfugama kusvika pakufa kwake.
Zvinonzwika kuderedza, asi mugumisiro wakanaka. Kubviswa kwevhuti uye zvakanyatsotarisa, Mikey Jumps yakakwana yekutamba mitambo, inogunun'una kune zvinyorwa zvepakutanga mumakwikwi (ane hooks uye mabhoti anotsvaga pamusoro) uye ane unhu hwakanaka hwekugadzikana hunogara chete kurutivi rworudyi rwekutsamwa kukuru.
Minimal arcade game Yakakwirira-soro! ndeimwe yezvinyorwa zviri pamapepa zvinoratidzika sezvisiri nyore, asi chaizvoizvo zvinogona kuita kuti chigunwe chako uye uropi huve nekuwisira kunotyisa.
Chikamu chiduku chinotenderera mberi nechokunze kwechokuvhara, kuchinja ruvara chero nguva iyo inosvika pamucheto uye inodzokorora mutungamiri. Chinangwa chako ndechekubatanidza chinyorwa chine mavara kana chikara ichipfuura.
Iyo nyoka ndeyekuti chikara zvino chinoshandura muvara zvakare; uyezve, zvinyorwa zvose zvinoshandura ruvara apo kara rinopinza chitubu.
Kuwedzera kumatambudziko ako, Kumusoro-soro! inogara ichikurumidza, uye, nokudaro ichishandura ku-high-octane dexterity uye kuedza kuongorora. Combos ndiyo nheyo yezvikwata zvepamusoro uye, sezvakamboita, imwe mhosho inotsvaga mutsara pamusoro.
Satellina Zero iyo imwe nzira isinganzwisisiki iyo inokwereta kubva kumhanyi asingagumi uye rhythm action titles. Iwe unotamba semuchena machena, kusvetera kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kuti uwedzere hexagoni dzakasvibirira dzichibuda kubva kumusoro. Iwe unogonawo kudonha, iyo inokukandira iwe kune imwe nzvimbo yakakwana iyo panguva imwe chete ichichinja mahexagoni matsvuku kuti aite ruvara (uye magreens kuti adzoke). Zvinonzwika zvakaoma, asi hazvisi zvechokwadi.
Kuponeswa kunobva pakucherechedza nekufungisisa nokukurumidza, kwaunofanira kugara uchichengetedza kuti chero zvipi zvese zvinenge zvichisvika ndeye ruvara rwakanaka, svetuka kune imwe nguva yakakwana, uye slide kuti uite zvose. Kuguma kwenguva yakakwana uye iwe unotanga mitsva nemimhanzi.
Zvingave zvaifadza kuona zvikwangwani zvakaitwa nehuwandu hwezvikamu, panzvimbo pemitambo inosanganisira mashizha-randomized mazaya anogara achipera pane hexagon imwe isina kurasikirwa; zvisinei, Satellina Zero inoshandiswa, inokurudzira arcade chiitiko.
Blokout inenge ine hasha, yakakurumbira-yemuvara-iyo mutsara inokuranga iwe zvishoma zvishoma kudedera. Nzira yekutanga inokutungamirira mberi kwetatu-ne-nhatu grid, uye iwe unofanira kutengesa zvivara zvemavara, Bejeweled-style, kuita mitsara yakakwana, iyo inobva yapera.
Iyo timer ndiyo kiyi yemutambo. Wachi inogara kumusoro-kuruboshwe kwechiso uye inokurumidza kuverenga pasi, inokupa iwe mashoma mashoma ekuzadzisa mutsara. Kana iyo nguva inopera kuoma, mutambo wapera; gadzira tambo uye ino resets, ikupa mamwe masekondi mashoma.
Iko kusimba saka inogara yakagadzirirwa kusvika pakukora, zvakanakira kusiyanisa nemitambo ine hushamwari, hushingi mavara (ayo anoshandura sutu nhema uye chena iyo pakarepo iwe yaunorasikirwa); uye kana iwe ukanamatira uchitenderera, iwe unowana zvimwe zvinonetsa nenzira yekuwedzera uye nzira dzakasimba.
Kune mashomanana emakwikwi emakwikwi akacheneswa uye akakurudzirwa zvakakwana se Usandikanganwa - uye isu tiri kutaura kune ese mapuratifomu, kwete chete iPhone.
Mutambo unoisa iwe munzira dzakagadzirwa mugomba, uchikupa basa nekudya maruva ese, uchibata kiyi uye kugadzira kubuda. Nguva yose iyi, iwe unopfura pamberi, uchiputika padutu remumwe neumwe wedende.
Chii chinoita kuti mutsara wacho urege kuparadzana kubva panguva yahwo ndeye simba, simba uye zvakasiyana-siyana. Nzira dzakawanda dzinosungira mazano, uye vavengi vakawanda vakasiyana-siyana vanowanikwa mune huno hunosiyana kuti varambe mutambo wemupapa wakasiyana.
Vamwe vanoramba vachigara mumba mako, asi vamwe vanogutsikana vachirova chero chinhu chakaipoteredza-zvikabatanidza maze. Inokodzera chigunwe chimwe-chemukati mumasikirwo kana mamiriro ezvinhu, Yeukai-Me-Kwete isati yemazamu.
Zvakakodzera zita rakapiwa, rakapiwa kuti rine zvigaro zvepuratifomu uye chinangwa chokuita kuti unetseke, Platform vhunduka iyo yakakurumidza-single-screen screen game. Pose paunopinda chinyorwa chitsva, iwe unoparadzaniswa wechipiri kuti uite zvauri kuitika usati waenda mberi, uchiedza kurova misungo yakasiyana-siyana. Sezvo kazhinji iyo nzira yekutamba mitambo yekutamba, rimwe chete rinoputira rufu.
Pane DNA inomhanya-mhanya muPlatform Panic, sezvo unhu hwenyu husingamboregi kutamba - kunyange iwe unogona kuchinja mazano avo nechekuputi uye, zvakakosha, svetuka mumhepo. Pamitambo yakawanda, iwe uchanzwisisa kuti ungarova sei firiji, uye inongova mubvunzo wekutsanidza pamwe nhamba yekuedza kubudirira.
Izvi zviri nyore kutaura pane kuita, pfungwa. Zvikamu zvinopfuura gumi ndezvechimwe chinhu chokuzvirumbidza munyika yePlatform Panic. Kunyange zvakadaro, mitambo yakapfupika zvokuti apo kamwana kadiki yako yakawanda yakarovererwa zvakashata, nguva dzose pane nguva yeimwe kuenda.
Chimwe chezvinhu zvisingaiti zvachose zvatinowana pane iPhone, Cally's Caves 3 inzvimbo yakasimba yepamuti yemauto iyo yakapiwa zvachose nokuda kwekusununguka. Zvizhinji zvezvikamu munharaunda masere dzinowana zita reCally rinotsvaga vabereki vake, avo vakakwanisa kubatwa nehunhu hwakaipa - kwechitatu.
Hazvina maturo, Cally haasi kunyanya kuputika nekushandurwa kwezviitiko, uye iye zvino anowanzove achishungurudzika kwazvo akazvigadzirira musikana wechidiki akavhiringidzwa. Anokwakuka-famba, achitsvaga vavengi, achiwana kubheta, uye achigadzirira kubuda, mumutambo unoedzwa uye unoedzwa.
Uyu mutambo wakaoma. Kunyange zvazvo iwe unogona kuva nekusingaperi kusinganzwisisiki, Cally's Caves 3 inotarisana nenharaunda dzekutarisa, ichikugombedzera kuti usangotadza kumira mberi. Asi akachenjera mazano ekugadzira uye chirongwa chinoshamisa chekuvandudza muenzaniso unochengetedza kushungurudzika zvishoma uye unoita kuti iyi ndeimwe yemitambo yakanakisisa yemhando yayo pane iPhone.
Sezviri pachena akadzimwa nekuzvipira kwe chess kune kunaka, kukwidzika uye kuenzanisa, muvadziri we Chaizvoizvo Bad Chess vakagadzirirwa kuti varove. Saka iwe unotanga mutsara wako wekutanga neine zvakashata zvakasungwa-zvidimbu zvezvidimbu: maverengi mapeji, uye nematombo emakumbo. Mhare yako yepakombiyuta isina njodzi inogona kungotarisa painenge yakabatana nenhamba inoshusha yepawns.
Chimwe chinhu chinonyanya kukunda gare gare uye iwe uzere nechivimbo, asi Chaizvo Chess yakaipa inoramba ichichinja zvinhu. Panzvimbo pekuti AI iite zviri nani kana yakaipa, mutambo unochinja chikamu chekuisa kwako. Sezvaunovandudza, zvidimbu zvako zvinowedzera uye kombiyuta inoita zviri nani, kusvikira iwe uri iwe unofambisa muvengi ane simba.
Icho chiduku chiduku pane chess formula, kuva nechokwadi, asi iyo inozarura nzira dzakawanda dzekutamba, pasinei kuti iwe uri gurukota kana hama yechizvarwa.
In Maximum Car, iwe unotarisa mumigwagwa inofambisa, uchiputika motokari yako yeganda mune mamwe magetsi akafanana neGeor-like. Kana zvichikwanisika, iwe unobata zvombo zvako nekunakidza kuregera, kukurudzira, kukurumidza, uye kazhinji kubhadhara pamwe chete semwedzi. Zvakangofanana neKuvhuvhuta-kubviswa kana kubuda kwakanyanya kwechisimba.
Kutya kwako kwevamwe vashandisi vemugwagwa (kuburikidza nekuswedera pedyo nekushambadzira uye kushambadzira kwakanyanyisa kunzira isina kururama yemugwagwa), anokupa mubhadharo wekushandiswa pakugadzira simba rako. Ita izvozvi uye Maximum Motokari inomhanya zvakanyanya, ichivharira munharaunda isina musoro uye isingagoni kudzora.
Kutorwa (sezviri mukati, kupwanya dzimwe motokari mumugwagwa) zvakanyatsokurudzirwa; kuparadza motokari imwe chete pamusoro pemadzinza akakwana uye ichasvinudzwa kutengwa.
Pamwe nerurimi-mu-cheek rinotsanangura rwiyo, izvi zvose zvinokuvaraidza zvisingabatsiri-zvakakurumbira zvekurumidza kukurumidza kwekudhidzira-kutengesa, uye zvachose kwete chimwe chinhu chaunofanira kutamba musati mutevedzo wekutyaira.
Uyu mukova wechitatu muDots series, Dots & Co, achajairika kune chero munhu akatamba zvakamboedza. Chinangwa ndechokuunganidza nhamba isati yagadziriswa yemachira emavara pane imwe neimwe nhanho, iyo inowanikwa nekukwevera nzira kunze kwemadheti erudzi rumwe chete. Mataini kudhirowa dhizagi uye ose madiki ewakakodzera ruvara anopera.
Zvipingamupinyi zvinouya nenzira yemazinga akasangana-akasangana anowanzo kukusiya iwe nemapoka madiki madiki akakomberedzwa mukati memawere chimiro, uye zvipingamupinyi zvinoda kujekeswa. Cartoon 'shamwari' dzinobatsira zvishoma pano, kuputika kure kubhodhi kana iwe uchinge wasimbisa ivo kumusoro, uyezve kune mashoma mashoma masimba ekushandisa.
Pano pano mazango eDots & Co anopera zvishoma - mutambo uchiramba uchienderera, haugone kubatsira asi kunzwa kuti urikupihwa zvisingaite mabasa, uye kuti rombo rakaipa rinotarisirwa kurova nhanho pasina kushandisa marokosi ekushandisa pamasimba kana mamwe mafambiro. Kunyangwe izvi, Dots & Co inoramba iri inonakidza uye inobata nguva kunyura.
Ivo havauyi zviri nyore kupfuura Kubix, iyo inopfupisa chinangwa chemutambo mune chinotevera hyphen muzita rayo rakazara App Store: 'Bata matete machena uye dzivisa vatema'. Kune, zvakanaka, zvishoma kune icho kupfuura izvo. Sezvo iwe uri kudzikisira mudziyo wako kupaza diki diki uye kusungira chena iwo ekupedzisira anowedzera kune anogara achidonhedza simba dura.
Iwe unozogara uchiona matinji ane mucherechedzo wekukanda nzira yekupinda munhandare. Bata imwe painenge iri chena uye iwe unowana kushamisika kwakanaka, senge zwere dzese dzichitendeuka kuchena. Bata imwe kana kwasviba uye iwe uchave uri mune yakashata nguva, kuyedza kurarama mugungwa renzvimbo dema, kana kudzivirira mapikisheni akashata kudaro uchirovera kamwe kamwe kusinganzwisisike chena denderedzwa.
Mitambo miviri mune imwe, Big Bang Racing inopa breezy single-player test experiment pamusungo-wakazadza zvikuru-kupfuura-mararamiro ehupenyu, uyezve mitambo yevadzidzi vakawanda mumasangano akafanana nemapenzi. Zviratidzo zvakajeka zvikuru, uye musinganzwisisiki mutasvi wechirwere akazara neunhu hwakawanda; hutungamiri hunoita zvakanaka, zvakare, nemapoka maviri emabhatani ekufambisa uye kuchinja bhasikoro rako.
Mutambo wacho wakazara neyakajairika kuteyiwa kwemazita ezvino freemium mazita - chipfuva; nguva; mu-mutambo wegoridhe; mune-app kutenga - asi, zvinoshamisa, izvi hazviite mutsauko wakawanda kana kunyatso kukanganisa pachiitiko. Netsungiriro diki, unogona kutamba makwikwi mashoma mazuva ese, zvishoma nezvishoma uchimhanyisa bhasikoro rako, kukunda mijaho, uye makosi ekugona.
Chengetedza zvikwani zvakakwana uye mabhomba kubva mumapfupa uye iwe unogona kunge uine go in pakusika uye kugovera maitiro ako pachako, uchishandisa mharidzo yakaisvonaka yakagadzirwa.
Poker uye Solitaire zvakaputirwa pamwe chete, mune zvakanakisisa ripararire Solitaire, asi Politaire anoedza chimwe chinhu chitsva pamwe chete.
Pamashoko ose, unogona kuona makadhi matatu anotevera kubva mumurwi we draw. Iwe zvino shandura makadhi asingadiwi kubva paruoko rwako nechinangwa cheavo vasara uye chero vatsva vanoita ruoko rwekugadzira, izvo zvino zvinopera, zvichingoerekana zvaunza makadhi matsva.
Pazvinogoneka, iwe unoda kukora 'combos', kuburikidza nemaoko mazhinji anozoitika newe usingaite chero chinhu. Nomuzvarirwo, izvi zvinoda rombo rakanaka, asi pane zvakare hunyanzvi hunyanzvi pano, maererano nekutarisira makadhi ako uye kutsvaga zviri kuuya mumurwi.
Zvinonzwika kunge zvinovhiringidza, asi zvipe nguva uye zvichachera mukati mako mweya chaiwo.
Kune rusununguko, iwe unopa rupo unotora iyo yose yakakosha-yemasikisi yemutambo, iyo inokurumidza kukurumidza kuwedzera. Tambanudza kune imwe-off IAP ($ 1.99 / £ 1.99 / AU $ 2.99) uye unosvitsa kaviri yemasikirwo emhando uye mamwe makadhi ekugadzirisa, pamwe nekubvisa pane dzimwe nguva kushambadzira.
kwaari inongova imwe-bhatani-puzzle-platformer iyo inongokuda kuti ubate pikironi kuti usvetuke kubva pamakona kusvika kune rimwe divi uye uunganidze machira ose mudanga.
Inoonekwa yakanaka inozokwevera iwe mukati meyakareruka asi ichiita gameplay, nepo mapikicha ayo achikutsiura nemabhonasi anodikanwa uye akasiyana manomano. Uye kune iwo ma60 mazinga zvakare ayo ane chokwadi chekukwirisa uye kushamisa sezvaunodhonzera kuburikidza neichi chidiki diki.
Loop Mania iri mishonga yemidziyo yemidziyo iyo ndeyechokwadi kupikisa mafungiro ako uye unyanzvi hwenguva. Kuti uwedzere chikwata chako unoda kuunganidza marotsani akawanda sezvinobvira sezvo denderedzwa yako ichikomberedza chitenderedzwa cheloop, paunenge uchidzivirira mabhora makuru mumugwagwa wayo.
Idzidziso ndeyekupukuta skrini kuti utange bhora rako kune vamwe kuti uvaparadze nekuda kwemamwe mapoinzi. Ingo tora kwete panguva isiriyo kana nhangemutange yako yapera.
Sarudza nzira yako pachayo uye uongorore mavheti evehiyo eguta reVictorian Kuwa London. Tsanangura zvauchazoita uye nekuchenjera chimiro chehunhu wako ne sarudzo yega yega yaunogadzira uye yekuda iwe uzadzise.
Iyi nyanzvi yeRGG ine nyanzvi yekunyora yakanyatsojeka kukukwevera iwe kune rima asi nyika ine ruzivo sezvaunoshamwaridzana nevagari vemo uye kusarudza nzira yaunofunga kuti unoda kuenderera nayo.
Spellspire kukupa mubayiro wekuva nemashoko makuru sejeri rimwe nerimwe raunopamba zvinoda iwe kuti uuye nemashoko akawanda sezvaunokwanisa kuti ukunde vavengi varo uye uwane pfuma iyo isingaoneki pakupedzisira.
Mari yaunowana kubva pane zvose zvinopambwa zvinogona kushandiswa kuvandudza mafungiro ako uye zvombo kuitira kuti shoko rimwe nerimwe rauri kupora riite zvakanyanya kukuvara. Ndeapi mazinga angakwanisa kujekesa?
Sezvo zita racho rinoreva, Looty mugomba anoedza unyanzvi hwako hwekupona sezvaunotora nzira yako kuburikidza nemapuranga asingagumi anogara nemisungo, vashandi, uye kuwira pasi.
Tora mari yekutenga magamba akawedzerwa, imwe neimwe iine masimba akasiyana nemateki, uchengete mutambo mutsva. Njodzi dzakavanzwa dzinogona kupedzisa kupaza kwako, saka tsika-tsika nokungwarira uye utakure bakatwa rakakura - iri zano rakanaka rehupenyu chaizvo, handizvo here?
Zvakanaka, pamwe kwete pfumo. Zvichida pfungwa yekuzvivimba ... Hupenyu dzimwe nguva hungangove hweenzanisiro zvakare.
PKTBALL inotora ping pong uye inoshanduka kuva yekusingaperi arcade addiction. Dzorera vadzivisi vako kuti uwane purogiramu yakanakisisa yaunogona, kuwana mari, uye ufukidze zvakawanda zvevaravara zvinogona kutamba, mumwe nomumwe ane dare ravo uye soundtrack.
Paunenge uchinge uchiziva zvekutanga unokwanisa kupomhodza shamwari dzako mumitambo yemunharaunda yakawanda kana kungorova nzira yako kumusoro kwemabhodhi ebhodhi. Urwu ndirwo rudzi rwemutambo waunotanga kutamba uchigadzira kudya kwemanheru uye chete tarisa kumusoro kubva apo moto webrigade uri kuputsa suo rako.
Humambo hweDisney mavara hunogona kuvhurwa mune iyi imwe nzira kutarisa kune inozivikanwa nzira-yekuyambuka mutambo - zvinehungwaru zita Disney Crossy Road.
Iyo 'yemashiripiti anotora' pamutambo uyo wakatorwa pasi pe 50 mamirioni nguva, uye yakagadzirirwa kukwezva raft nyowani yevatambi.
Muyambuke semigwagwa yakawanda iwe unogona uye uwane mari yekutenga kunyange nyeredzi dzakawanda dzinotanga mafirimu akasiyana-siyana eDisney, mumwe nomumwe ane mimhanzi yavo uye nyika yevose mafirimu mafirimu kunze uko.
Uye sezvaunogona kufungidzira (kana iwe wakatamba iyo 'yakajairika' Crossy Road pamberi), iwe uchaona kuti iwe ungapukunyuka sei nezvako zvaunofarira kubva Toy Toy, Simba King, Zootopia, uye zvimwe zvakawanda.
Inonakidza, inowanzoitika, uye inodhaka, Slide the Shakes mutambo unoramba wakatendeka kune zita rawo uye zvinetso zvako kuti uise maruva akasiyana-siyana pamiti yakanyatsoiswa pamakiromita usingabatsiri. Dzokera shure uye utumire girazi yako ichibhururuka uye uchitarisira iyo inzvimbo kwaunoda.
Sparkwave mutambo uri nyore asi wakapomha paunotungamira chisvinu chemwenje nenzira isingaperi nzira inoumbwa nemisungo, yakaunganidzwa, uye masimba-kumusoro. Iwe unofanirwa kuve neminwe inokurumidza kana iwe uchida kuramba uri mupenyu sezvo zvipingamupinyi zvichawedzera masekondi usati wamhanyira mukati mavo. Iwe zvakare unogona kutora makristuru kuti uvhure matsva matsva uye masimba-kumusoro ayo anogona kunyatso shandura nzira yaunotamba.
The classic run-and-gun franchise inotora musvingo rekudzivirira genre in Metal Slug Attack. Misheni muzita iri rine mavara anopedzisira auya kuzoparadza nhare yemuvengi wako uchishandisa yako dhiza remauto. Iwe unogona zvakare kutamba pamhepo nevamwe, uye enda kumishoni kununura vasungwa, zvombo, kana zvinhu zvinogona kubatsira kanzuru yako.
Tennis Champs Returns iri remake rakasimba kune 1995 Amiga tennis game uye inounza nayo yakawandisa yakawanda yakawedzerwa uye kutaridzika kwemafoni. Iwe unogona kukwira pamakwikwi mumashandiro emafambisi uye kupikisa kombiyuta kumatambo anowedzera zvakaoma. Kana, kukwikwidzana nevashori munyika yese mukukurumidza. Zvinetso zvezuva nezuva uye mitambo miduku zvinobatsira kuchengetedza nharaunda dzinofadza dzichienda.
Uyai nemuvara mudura nyika in Splash Cars, mutambo wemujaho uyo unokutendera kutyaira uchitenderedza kupenda taundi dzvuku, girini, uye mamwe mavara uchidzivirira mapurisa. Tora gasi kuti urambe uchityaira uye uunganidze mari yekuvhura masimba-kumusoro inoita kuti kupedzisa pendi yega yega inoda zvirinyore.
Chiitiko chakaisvonaka, Sky Chasers inoda kuti ushandise zvigunwe kutungamira chimiro chako munzira-dzekupuruzira nzira dzinounganidza mari uye kupedzisa-mabvunzurudzo eshamwari dzake. Yako kadhibhodhi ngarava ine mashoma magetsi magetsi, saka iwe unombofanira kumira nekutarisa kuti uwedzere uye kudzivirira chero pesky vavengi vanowedzera chinhu chine njodzi parwendo rwako rune runyararo. Gadzirisa mapikicha akareruka uye simudza chikepe chako sezvo iwe uchinakidzwa nehupfumi hwayo nyika.
ngura Bucket inoshandura pfungwa yemutambo wakatendeuka-kuita chipanje-senge roguelike iri kuputika kutamba. Imwe neimwe nhanho inoda kuti ufambe nenzira yako mudumbu kuti usvike pachinangwa chayo, asi nedanho rega raunotora, vavengi vako vanofambisawo mune akasiyana maitiro. Isu chakakosha kuti urarame sezvo usingade kuenda pamberi pemuvengi uchiziva kuti chinogona kukuuraya munzira yako inotevera.
Planet Quest iyi rwiyo-yakavakirwa arcade mutambo uyo iwe iwe unotamba semutorwa uyo anokanda mhuka kune kurohwa kwemamwe mimhanzi inonakidza. Nguva matepi ako zvakanaka kuti ubvise zvakakwana, asi dzivisa kuvhara maruva chero maruva sezvo vatorwa sezviri pachena haavade kwazvo. Kupfuura anopfuura awa yemagetsi, techno, uye dzakasiyana-siyana mimhanzi yakamirira nzeve dzako sezvaunovavarira kuwana iri nani alama pese paunotamba.
Dzidza pamusoro pesimba rakachena sezvaunotamba kuburikidza nenyika dzakanaka Nzira yeLuma, puzzler iyo iwe unofamba kubva pasi kuenda kune planete kuti uite simba. Shandura mapuraneti ose uye shandisa simba rechisikigo sechiedza chezuva uye mhepo kuti iite simba nekugadzirisa uye uzarure nzira mberi kwako. Nekushanda zvakaoma, mapurogiramu anofa anouya ari mupenyu apo iwe uchitamba kuburikidza ne20 kudzikama mazinga.
Achitsvaga sekuru vake vakashaika, mukomana mudiki anorasika pasi peimba yemarambi uye zvino anofanira kupukunyuka kubva kune labyrinth yakazadzwa nemisungo uye zvakavanzika. Mugomba wega wega wekushongedza unofanirwa kutenderedzwa kuitira kutungamira mukomana kune iyo tangi inosvitsa kune inotevera. Iwe unozofanirwa kuzvigadzirira spikes, levers, crumbling mapuratifomu, uye nezvimwe zvinonetsa zvinowedzera zvakaoma apo paunoyedza kurarama. Pasi peE Lighthouse.
Haangararami komiyuta ndeyekuda kuziva inoda kuti iwe utyaire mota kuenda kwavari kuenda, asi chekubata ndechekuti nzira dzakambogadziriswa kare dzinotamba dzirarama sezvaunofungidzira inotevera. A timer iri kungogara ichidzika pasi, saka kwete chete iwe uchafanirwa kuve nekutarisisa nezve traffic, asi iwe zvakare unofanirwa kukurumidza uye kutora magetsi-kumusoro kuti uwedzere kushanya kwako. Unyanzvi hwako hwekutyaira uye hwekufunga zvine chokwadi chekuedzwa.
Sarudza kubva kune imwe yezvikwata zvishanu uye makirasi uye kutora nyika yakawanda Order & Chaos 2: Kununurwa, yakasimba MMORPG iyo inogadzirwa kutamba kwenhare. Kunyangwe iwe uchibatana neshamwari kana uchienda wega, Kununurwa kwehuwandu hwekupa mibairo kunobatsira kuchakuchengeta uchidzoka kuzhinji sezvo iwe uchiona humambo hwakanaka uye hunotyisa humambo hweHaradon. Quotes yemazuva ese, matambudziko, uye PvP duels ane chokwadi chekuchengeta iwe pane zvigunwe zvako zvisinei kuti unotamba sei.
Unganidza teddy bears uye ushandise kuti ikubatsire pakuita mashoko mukunakidza Alphabear. Dare rezuva nezuva nematambudziko zvinoda kuti iwe uuye nemashoko ane tsamba dzinoonekwa pahwindo rako. Nguva imwe neimwe yamunenge muchiita, mbongoro dzichazadza bhodhi uye dzichiwedzera kukura kwemashoko ako anoshandisa pedo navo. Ita bhabhi rakakura iwe unogona uye rakananga mumatunhu uye kodzero dzekuzvikudza.
Pasi Pomo yakafanana neCrossy Road, asi hausi kuyambuka chero migwagwa kana dodging traffic. Panzvimbo iyoyo, iwe uchafanirwa kutungamira wako akatsunga mukweguri pasi anovharira lu Q * bert uye dzivirira zvine njodzi pasi, mabheya, uye zvimwe zvisingaiti zvipingamupinyi zvinogumisa iko kubereka. Vhura zvipo munzira uye unganidza mari kuti uvhure mavara ane mavara kuti akwire pasi na.
Dzorera shamwari dzako kana vanhu vasingatombozivi Capitals, mutambo woushamwari mutambo uyo unotora rimwe zano kunyatso. Pese paunopikisa mumwe munhu, iwe unofanirwa kushandisa mavara akakomberedza "capital" yako kuwedzera nzvimbo yako yekupesvedzera. Kana muvengi wako akashandisa mavara ako, achaatora uye zvishoma nezvishoma anotanga kutora nzvimbo. Kubata kwakanaka kwemazwi uye humwe hunyanzvi hwekufunga kufunga ndizvo zvishandiso zvako zvekukunda guta remunhu wese.
Homage kune 16-bit platformers yekare, Super Dangerous Dungeons ine chokwadi chekudzosa munguva nenguva neye pixelated yavo vhidhi uye SNES-yakafuridzirwa kurira kurira. Makumi mana nemasere emavara mavara anoratidzira classic marangi ane chokwadi chekuita kuti iwe urambe uchidenhwa paunogadzirisa mapikicha, vhura switch, uye tsvaga iyo kiyi yakavhurika yekuvhura musuwo kune inotevera. Dzivisa idzo dzakadzika dzisipo nemvura ine njodzi uye uchave wakanaka.
Ita mashoko nekukurumidza sezvaungagona mumutambo uyu unokurumidza kutsvaga unobatanidza kugumburana neine bitamboplay. Chinhu chacho Coolson's Pocket Pack kurarama kwenguva yakareba sezvaunokwanisa iwe uchiita mazwi ehurefu uchishandisa mavara anotanga kuwira pasi. Funga nekukurumidza uye fambisa mavara kutenderedza kuti uite nzira yako kuburikidza nemazwi akateedzana ekuwedzera ketani combos, asi tora yakareba uye skrini ichafashukira - mutambo pamusoro.
Isu takaona akawanda mashoma nzvimbo-kick-flick-based kuedza pane iyo iPhone, asi Muduku muduku zvinounzawo ndangariro dzechinyakare-chikoro cheArcade chinofamba seSOS. Izvo zvese goalmouth chiitiko pano, zvakadaro, iwe uchirovera kubva kune yakagadzika-zvidimbu, pakutanga inopesana nechinangwa chakazaruka, asi pakupedzisira nekuzvidza curling yako bhora yapfuura madziro evadziviriri uye anofamba-famba 'muchengeti.
Isu isu takavhara chinyorwa kubva kunyika yeBittleBigPlanet paIOS, mune imwezve mumhanyi asingagumi. Tinofanira kusvetuka nekurova tsvina, chaizvo, asi Mhanya SackBoy! Mhanya! yakanakisa, ine nzvimbo inoshamisa yakavakirwa pazita reLitBBPlanet. Iyo Gameplay ine intuitive uye yakapusa, asi yekusarudzika level dhizaini inokuchengeta iwe uchidzoka nguva nenguva zvakare.
Iwe unoziva iyo yakakurumbira Fallout 4 mutambo isu tese tave kufara nezve? Wadii kupinda mune post apocalyptic mhemo neBethesda iyi yakaitwa spin-off mutambo? Fallout pekugara anoona iwe uchitora kutonga kweVault kubva mumutambo wenhabvu sezvaunoyedza kuita kuti vese vagari vemo vafare uku uchivadzivirira kubva pakutyisa kwekunze. Iyo inosekesa nzira diki yekufara pamusoro pemutambo unouya apo zvakare kuva kukuru mune kwayo kwayo.
Iwe unofanirwa kupa Yakasimba: Mars One nguva shomashoma yekukohodha mahuku ayo mukati mako. Pakutanga, zvinoita kunge ichiri imwe auto-mumhanyi. Iyo blocky retro mifananidzo yakanaka, asi, zvakanaka, takambozviona zvese izvi zvisati zvaitika. Asi wobva waona iyo smart level level dhizaini, uye nenzira iyo iwe yaunofanirwa kuchengeta yako wechidiki wekumhanya achimhanya, kuti arege kupera mweya. Kutsvedza, jet-mapaketi uye kumadziro-kusvetuka zvakabatanidzwa mukati mekusangana sezvo mutambo wacho flings inowedzera kuoma mapako mumawire ako. Mhedzisiro yacho inopedzisira yakafanana neyakagadzirirwa 8-bit Rayman muchadenga - uye izvo zvisati zvaitika iwe usati wambofungidzira kunyange muasync vatambi vakawanda!
Iwe haugone kubatsira asi kuwana pfungwa yekuzviona zvese izvi zvisati zvaitika pakutanga kutamba Yawa. Zvichakurumidza, asi iwe, uchave unokanganiswa nekunyengera kusanganisa pachinko uye kuita kwemavara, pamwe nerwiyo rwunofadza rwunonzwa kunge munhu akagwinyirwa Krafwerk mu iPhone yako. Mutambo wacho pachawo uri nyore: mabhora anodonha kubva kumusoro kwechidzitiro uye unofanirwa kutenderera vhiri rako reruvara kuti rirove chakakona. Kukanganisa katatu uye wapedza. Spin nzira dzese kutenderera pakati pehits uye iwe unowana mari inogona kupedzerwa pakukwezva kukwidziridzwa uko dzimwe nguva kunodonha kubva pamusoro pechidzitiro.
Uyu mutambo unoponesa izere nehunhu, apo paunobatsira munhu weVictorian nyoro, kunze kwebumbiro rake remanheru. Dambudziko ndere mhepo, uye ngowani nyowani iri mungozi yekuputika panguva yekugwinya - chengetedza skrini uye iye anoibata munzvimbo. Nhanho yega yega inowedzera dhigiri yako uye zvakare mikana yekuona zvinotaurwa zvinofunga kubva kune yakavezwa chap.
Iyo Boulder Dash yakatevedzana ine mutsara murefu, asi ino inguva yekutanga vogadziri vevakagadzira kuti vabatanidzane kubva pakapusa 1984 yekutanga. Iyo zvakare yenguva yekutanga (mukuyedza kwakati) mutambo wakashanda paApp. The mutambo pachawo iri bhizinesi sechinhu chinowanzoitika: cheka mumarara; kudzivisa matombo uye vavengi; kubata zvigadzirwa. Asi rinoratidzika zvakanaka, rinodzora zvakanaka, uye rinosanganisira mapako okutanga seAAP inosarudzwa.
Sky Force 2014 inopemberera mafoni akatevedzana 10th yemhemberero muchimiro, neinoshamisa iyi yepamusoro-pasi arcade blaster. Chikepe chako chidiki diki, sezvakamboita, chine basa nekusuka munzira ichipfuura nemuvengi ane hutsinye, kutsakatisa zvese zvirikuonekwa. Izvo zvinoonekwa zvinoshamisa, dhizaini yakanaka, uye mabhosi akakura, achiparadzira bullet-gehena mukutenderera kwako kwakawanda.
Pane imwe nguva, buffoon yakazara yakatemwa kuti mutambo wemujahwo unofanirwa kuve wakasvibirira uye we grey, pamatanho egrey, ane grey kutonga. Gameloft's Asphalt 8: kuenda neherikoputa kupokana nepfungwa dzakapusa dzakadaro, pamwe chete nezvakawanda zvechokwadi. Pano, saka, iwe unofamba uchimhanya-mhanya nekumhanya-mhanya kumhanya, uchifambisa kwemamaira kuburikidza nemitambo inonakidza yeguta, dzimwe nguva uchikandirwa mumhepo kuti uite zvinoshamisa izvo zvisingagamuchirike maererano newarandi remugadziri wemotokari.
Vazhinji Vagadziri vanogadzira mitambo kubva kune kodhi, asi isu tine chokwadi chechokwadi Hero Academy'inoumbwa nezvinhu zvinopinda muropa zvinozivikanwa nevanhu vese zvakapfakanyuka pamwe nekubatidzirwa paApp Store.
Mutambo wacho wakasarudzika-chess uine mavara ekufungidzira, asi kushandurwa mukati mehutongi-hwakagadzwa kunopa husingagumi chiyero cheasynchronous imwe-pane-imwe kusangana. Yemahara, iwe unofanirwa kutsungirira pamwe nekushambadza uye chete unowana iyo 'yevanhu' timu, asi izvo zvichave zvinopfuura zvakakwana kuti iwe uve nehukama.
Matatu matatu anoita muti! Zvitatu zvitatu zvinoita kereke! Zvakanaka, saka manyorerwo angave asina Town Triple'sutu yakasimba, asi mutambo-mitatu mutambo wekupira muropa. Mechi yekuvaka zvinhu uye musungo mabheya, nekukurumidza kumhanya kunze kwenzvimbo, tarisa nekushamisika kune yako taundi uye wotanga kwese zvakare. Iyo yemahara-yekutamba-shanduro ine mashoma mafambiro ayo anogadziriswa zvishoma nezvishoma, asi iwe unogona kuvhura unlimited unofamba kuburikidza neIAP.
Kunyange zvazvo Asphalt 8 inotarisana nepamusoro peascers racers, Real Racing 3 inofamba yekutaridzika kwejugular. Zviratidzo zvaro zvinoshamisa zvinokukanda iwe zvakadzika mumusorosoro wepamusoro wekutambira unogadzirisa maitiro matsva pane zvigadzirwa zvemagetsi. Zvakawanda zvemotokari uye matanho zvinowedzera nguva refu, kunyange zvazvo uchiziva kuti mutambo unenge uchikurumidza uye unokurumidza kukurudzira iwe unofanirwa kutenga imwe ye-in-cash nemamwe emaoko ako akaoma-akawana.
Mashomanana emitambo yakasununguka yakanyatsoputika se Hearthstone, asi iyi iyi mutambo weBlizzard, saka hatina kutarisira chero chinhu chiduku.
Kune akati wandei emakadhi emakadhi aripo eApple, asi Hearthstone inomira kunze neyakagadzika zvigadzirwa zvetsika uye zviri nyore kudzidza, zvakaoma kugona mechanics, iyo inogona kukuchengeta iwe uchitamba, kuvandudza uye kuunganidza makadhi kwemwedzi kupera. Mateki haawanzo kutora akareba saka yakanakira kutamba mumapfupi mabhureki.
Funga kuti unoziva kunetsekana? Hauna kusangana nekushushikana kusvika watamba Spaceteam, mutambo wevashandi vakawanda vanoita kuti iwe mose mushande pamwe chete sevashandi (uye chengetedza mirairo kune shamwari dzako). Inonzwika zviri nyore kupfuura iyo; kukundikana kubatirana kunogona kupedzisira nechokepe chako chichinyatsopinda mumumvuri.
Mumutambo uyu, gorofu rakasangana nesolitaire uye ivo vakasarudza kusimuka vachisiya Mr. Game Game kuti vazadze mushe. Chasara ndechekuvaraidzwa kwekumusoro-kana-pasi, kwakadonhedzwa pamusoro pehurongwa hwakasununguka hwemahorofu goroti, neanotyisa gopher achiedza kutsikisa zvese. Iwe unowana akawanda makosi emahara newe Fairway Solitaire Blast uye anogona kushandisa IAP kutenga mamwe.
Iyo kaburi iri mumusoro wenyaya - pane kuda, uye inosanganisira kurohwa kwakawanda. Pane zvakadzika zvakavanzika, asi - mutambo wacho ungaratidzika senge Screen-masher, asi Punch Chikumbiro Zvese ndezvekunyora ma combos, kugadzirisa nguva yako, uye kushandisa zvakanaka kugona kwakakosha. Iwo-mumutambo wemari zvakare wakakura kwazvo, saka kana iwe uchida mutambo mubayiro weti nekubata vamwe IAP.
Maitiro ekuchengetedza zvevanhu mune zvebhizimusi mabhizimusi makuru, asi anowanzotakura zvizere nemashandi ekugadzira makanda. Nguva tiny Tower ane chifuramabwe cheIAP kuti chifambise zvinhu pamwe chete, chivakwa chekuvaka-shongwe uye kutarisira kunoramba kuchifadza kunyange iwe usingabhadhara zvachose, uye pixel graphics inofadza.
Tora zvakati wandei zvezvirongwa zvemberi uye muvazivise kunzira-yekudhirowa uye iwe une iyo isinganzwisisike inopindwa muropa yemitambo Chibozwa! Zvinangwa World. Sezvaunodzokorora nguva dzinotyisa dzehukuru hwebhola, mutambo uyu unomira kuti iwe uwane iyo bhora kunzvimbo yayo inotevera. Kururamisa kwakakupa mubayiro nenyeredzi; kutadza kungofungidzira zvinoreva kuti unomanikidzwa kutora yekugeza nguva pfupi.
Tinya! Tinya! Swipe! Pukuta! Argh! Ndiyo nzira iyi inodhakisa chihure chiito mutambo unotamba kunze. Groove Coaster Zero iyo yose iri pamigwagwa, uye yakasvibiswa yakazara ne-dizzying-roll-style-style paths nemitambo inofadza. Nguva yose iyi, iwe unofunga kuti uite kukwana, kukonzera hits uye zvimwe kufamba kune zviratidzo zvinowanikwa pachikona. Yakajeka, yakasongedza uye yakangwara.
Iyi yazvino fungidziro yeimwe yemitambo yechinyakare uye inonyanya kudiwa mitezo inobvunza kuti chii chiri pasi peyakaipisisa level ye256 glitch. Sezvazvinoitika, isingaperi mazey gehena yero yero dot-muncher. Pac-Man saka yakapihwa mhosva yekudya madota akawanda sezvinobvira, kudzivisa iyo inoita kunge isinga peri yemweya yezvipoko, nepo panguva imwe chete ichibuda iyo inopedza simba-rose. Masimba-kumusoro anokwanisa kuwedzera hupenyu hwePac-Man, achikupa simba kuti utore mitsara yezvipenga ne laser kana kuadzima pamwe nehure rinoputika.
Kunyangwe paine system system mukati Pac-Man 256, zvine chikonzero zvine rupo: chikwereti chimwe chemutambo nemasimba-kumusoro, uye imwe kune imwe chete enda; chikwereti chimwe chinozorodza maminetsi gumi, kusvika pamatanhatu, uye iwe unogona kugara uchitamba pasina magetsi-emahara. Kana iwe usingade izvo, kune IAP-based £ 5.99 / $ 7.99 yekutenga kusingaperi.
Ikusingaperi rally game Yakanyorwa Rally Redline anonyengera. Pamusoro, inotaridzika seyakareruka: fambisa kuruboshwe kana kurudyi munzira shanu-dzakatsanangurwa zvakajeka, uye shandisa iyo 'emergency time brake' kufamba mabiriketi anonzwisa tsitsi. Asi iyo brake inoda nguva yekuchaja zvakare mugwagwa nekukurumidza wova chock yakazara nemiti, mombe, cruise liners uye dinosaurs. Uye iwe waifunga kuti mota yako yemuno ine matambudziko!
Dots anotarisa uye anonzwa senge rudzi rwechinhu Jony Ive angave achitamba pane yake nguva yekuda (zvakanaka, achifuratira iwo mutambo wemutambo, uyo ungangove uri mutoo weScot Forstall). Iyo yakasarudzika yakarongedzwa madhodhi emavara anomirira, uye akafanana-eruvara anogona kubatanidzwa, mairi zvobva zvanyangarika, zvichikonzera zvimwe kuwira mudanga. Icho chinangwa: yakajeka yakawanda sezvinobvira - nemacombos akakura iwe aunogona kusanganisa - mune 60 masekondi.
Mune Smash Cops, iwe unofanirwa kunge uri murume akanaka, uchidzika pasi zvinokanganisa, kazhinji nekuvabvisa mukunonoka. Iye zvino Smash Bandits ndiyo nguva yako yekuita tsaizi ine njodzi, kusvetuka pakati pemotokari nekusiya nzira yekuparadzwa pawakamuka. Mutambo uyu zvakare uchisekerera unosanganisira iyo A-Team van uye gadget inozivikanwa chete seJibba Jabba. Isu tinoida kana chirongwa chikauya pamwechete!
Kana iwe uri weimwe vintage, iwe ungangodaro wapedza maawa akawanda uchitamba Solitaire paPC, kubudirira uchiwana mibairo nekadhi kubhomba kutenderedza skrini. ripararire Solitaireanovandudza akashamisika kuti sei iOS solitaire mitambo isina kufambira mberi mumakore ekupindira, uye akafunga kudzoreredza rudzi. Pano, saka, iwe unowana matatu-ne-matatu gidhi uye kubvisa makadhi uchishandisa poker maoko.
Rimwe zano rinowedzera kuburikidza nekukanganisa (maoko anofanirwa kusanganisira makadhi kubva kumitsara miviri; makadhi emakadhi haana kufanana) uye inogona kubatsira (mbiri 'kupaza', imwe yakazadzwa mushure meumwe ruoko rwakabudirira; nyeredzi inowanzo wedzera sutu). Makiromita mashoma kupinda, iwe unoona mutambo uyu wakadzika kupfuura watatanga kuoneka. Kupfuura izvozvo, iwe uchave wakamanikidzwa. Iyo imwe chete ye $ 2.29 / $ 2.99 IAP inowedzera mamwe modhi uye inouraya kushambadza.
Iwo AKANAKA Xbox Game Pass mazita iwe aunogona kutamba izvozvi
Best HTC Vive cosmos, Vive uye Vive Pro mitambo: Zviitiko zvinoshamisa kutamba izvozvi